I-B&B Baie-St-Paul, umbhede omkhulu, indlu yokugezela yangasese - I-Airbnb
I-B&B Baie-St-Paul, umbhede omkhulu, indlu yokugezela yangasese
417 okushiwo abanye
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Diane
U-Diane Ungumbungazi ovelele
Au Jardin d 'Orzanne B&B
Amanani abandakanya isidlo sasekuseni sokudla okuconsisa amathe,i-Wifi kanye nokupaka.
Qaphela: Sine-Airbnb, amanye amakamelo angu-2 akhangisayo, osayizi namanani ahlukene, negumbi lokugezela langasese ngaphakathi kwekamelo.
I-B&B isemgwaqweni othule kakhulu, kodwa imizuzu embalwa iya endaweni yedolobha, (1km) lapho ungathola khona amagalari obuciko, izitolo zemisebenzi yezandla nezindawo zokudlela ezinhle ezinikeza imikhiqizo yasendaweni ngentengo ezwakalayo.
Asinazo izilwane ezifuywayo ekhaya.
Qaphela: Wonke amanani abandakanya izintela kanye nesidlo sasekuseni sokudla okuconsisa amathe, i-WiFi kanye nokupaka.
Qaphela: Sine-Airbnb amanye amakamelo angu-2 akhangisayo, osayizi namanani ahlukene.
Amabhulakufesi ethu akhethekile enziwa ngezithako ezinempilo, zemvelo ezigxile emikhiqizweni yezinkathi zonyaka.
" I-LA CAMPAngerARDE" ikamelo (amamitha-skwele angu-8/amamitha-skwele angu-81) elinombhede omkhulu indlu yokugezela yangasese (amamitha-skwele angu-5/amamitha-skwele angu-53 kodwa ngaphandle kwekamelo phambi nje kwezinyathelo ezingu-2 kodwa ngasese, wonke amanye amakamelo achazwe kuwebhu yami anendlu yokugezela yangasese ngaphakathi kwekamelo). Ikamelo ligqamile futhi lihlotshiswe kahle, lifudumele kakhulu. Ungakwazi ukufinyelela ithala elikhulu ukuze uphumule futhi ujabulele ukubuka indawo. Izingubo zokulala, amathawula, i-shampoo, umshini wokomisa izinwele, izingilazi zewayini kanye nebhodlela lamanzi kufakiwe. Isidlo sasekuseni se-gourmet senziwe ngezithako ezinempilo, zemvelo ezigxile emikhiqizweni ye-Quebec. Uma unemikhawulo yokudla noma ukungezwani komzimba nokudla okuthile, sazise; sizojabula ukulungiselela ukudla kwakho ngokuvumelana nezimfuneko zakho.
Sizokwenza ukuhlala kwakho kube okungalibaleki.
4.96 · 417 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-417
Idolobhana lase-Baie St-Paul lihle. I-B&B isendaweni enokuthula, kude nomsindo nomgwaqo wedolobha. Uhamba imizuzu engu-15 kuphela ukuya endaweni yedolobha nemizuzu engu-3 ngemoto. Uzothola amagalari obuciko, izitolo zemisebenzi yezandla nezindawo zokudlela ezimangalisayo. Ibhishi elinehlathi elihle lilungele ukuhamba , ukuphumula ngencwadi noma ukujabulela ukubuka indawo.
kwi-terrace, iyindawo ekahle kakhulu yokuxoxa nabo bonke abanye abahambi.